Nanchang Micare Qalabka Caafimaadka ee Co., LTD
Nalalka raaxada leh si adduunka looga dhigo meel wanaagsan
Hal-abuurnimo, xushmad, guul-guul, masuuliyad, mahadnaq. Samee nalal caafimaad oo Fiican
Nanchang Micare Qalabka Caafimaadka ee Co., LTD waa ganacsi casri ah oo tiknoolajiyad sare leh, waxaan ku suganahay Aagga Horumarinta Teknolojiyada Qaranka ee Nanchang. Waxaan had iyo jeer diiradda saarnaa horumarinta iyo soo saarista nalalka caafimaadka. Alaabtayada ugu muhiimsan waxay daboolayaan Nalalka Qalliinka, Nalalka Imtixaanka Caafimaadka iyo Nalalka Caafimaadka, iwm. Nooca guud ee milicsiga nalalka nalalka 'LED Operating Light' ee la baarayo lana horumariyo nafteena ayaa gaaray heer caalami oo heer sare ah, horeyna ugu guuleystey dhowr shati qaran, waxaan noqonay hal-abuur hogaamiyaha warshadaha nalalka daawada. Shahaadada la helay waxay leedahay ISO13485, CE, shahaadada iibka bilaashka ah iyo wixii la mid ah.
Micare wuxuu u heellan yahay inuu siiyo jawi ammaan ah, caafimaad leh oo raaxo leh oo ku shaqeeya dhammaan kaqeybgalayaasha warshadaha caafimaadka, iyadoo la adeegsanayo guulihii ugu dambeeyay ee saynis & teknolojiyadeed, aqoonta xirfadeed ee cilmiga caafimaadka, iyo hal-abuurnimo isdaba-joog ah, si loo soo saaro quwad cagaaran & tamar, badbaado & wax soo saar wax ku ool ah, isla markaana loo abuuro qiimo weyn horumarka bulshada.
Shirkaddani waxay leedahay koox shaqaale tayo sare leh leh. Waxaan diiradda saareynaa fikradaha hawlgalka ee daacadnimada, xirfad iyo adeegga. Intaas waxaa sii dheer, mabda'ayagu waa inaan ka dhigno macaamiisha kuwo qanacsan, taas oo loo arko inay tahay aasaaska badbaadada. Waxaan u heellan nahay horumarinta shirkadeena iyo xirfadda isha iftiinka. Marka la eego badeecadaha, waxaan u fidineynaa macaamiisheenna u heellan tayo dhammaystiran oo leh dammaanad tayo leh si aan u gaarno mabaadi'deena macaamiisha u janjeedha oo tayo leh marka hore. Dhanka kale, waxaan u mahadcelineynaa macaamiisheena cusub iyo kuwa joogtada ah ee ku kalsoon alaabadayada. Waxaan sii wanaajin doonnaa badeecadaheena iyo adeegyadeena jira, waxaanna ku qaban doonnaa isbeddelkii ugu dambeeyay ee horumarka tikniyoolajiyadeed ee ku saleysan arrintan. Waxaan u dhigi doonaa wareeg cusub oo horumar farsamo hal-abuurnimo si aan u siino alaabooyin iyo adeegyo farsamo oo kafiican kuwa isticmaala. Micare wuxuu inta badan soo saaraa laambad hooska qalliinka ah, nalalka kaabayaasha qalliinka, nalka madaxa caafimaadka, muraayadda weyneysa caafimaadka, isha iftiinka caafimaadka qabow iyo noocyo kale.
Bishii Juun 2011
Bishii Juun 2011, Micare waxaa si rasmi ah loo aasaasay oo noqday soo saaraha aaladda Qalliinka Caafimaadka ee Gobolka Jiangxi.
Sannadkii 2014, guud ahaan iftiinka qalliinka LED wuxuu ku guuleystay abaalmarinta labaad ee alaabada cusub ee Jiangxi.
Laga soo bilaabo 2015 ilaa hadda
Laga soo bilaabo 2015 illaa hadda, shirkaddu hadda waxay leedahay alaab asaasi ah sida nalka qalliinka caafimaadka, laambadaha baaritaanka caafimaadka, ilaha caafimaadka qabow ee caafimaadka, nalka hore ee caafimaadka, iwm. bandhigyo caafimaad gudaha iyo dibaddaba marar badan waxayna ku guuleysteen ammaan loo dhan yahay macaamiisha.
derbiga nalka baaritaanka, Siraa Ilkaha, Iftiinka Caafimaadka, Laydhka Nalalka Hoggaamiya, Nalalka Halogen ee Falanqeeyaha Kiimikada, Siraalka Imtixaanka Halogen,